ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်မော်ကွန်းအိုလံပစ် - အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာ Investing
tag - အိုလံပစ်-ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်
အနည်းဆုံးအန္တရာယ်များနှင့်ကုန်သွယ်မှုကိုအချိန်ကိုက် - Olymp trade
Olymp trade လမ်းပြ ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ
သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏အသိပညာမျှဝေပါ! ဒါဟာခေတ်သစ်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာရိုးရှင်းနှင့်ထိရောက်မှု၏အံ့သြဖွယ်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. အထူးအသိပညာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်တောင်, သင်သည်ဤမဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ကြီးမြတ်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူကလျှောက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ကုန်သွယ်နည်းလမ်းနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း MACD နှင့် Parabolic SAR အပေါ်အခြေခံသည်။ [ ... ]